Mnyama ngePearl Jam - Izinto Zobugcisa
Mnyama ngePearl Jam
U-Eddie Vedder ucacisile kwi Pearl Jam amashumi amabini Incwadi ethi le ngoma imalunga nobudlelwane bokuqala. Ingoma imalunga nokuyeka, utshilo uVedder. 'Kunqabile kakhulu kubudlelwane bokumelana nomtsalane womhlaba kunye nalapho uza kuthatha abantu kwaye baya kukhula njani. Ndakhe ndeva kusithiwa awunakuba nothando lokwenene ngaphandle kokuba ibiluthando olungafunekiyo. Inzima, kuba eyona yakho inyanisekileyo yile ungenakuba nayo ngonaphakade. '
NgoSeptemba 1992, uPearl Jam wayehambile, kunye nee-singles ezintathu ezikhutshwe kwi-albhamu yabo yokuqala Oku : ' Uyaphila , '' Ukuhamba 'kunye' UJeremy . ' Iirekhodi zikaSony zazishushu kwaye zinzima ukukhupha 'uMnyama' njengowokuqala, kwaye yayilukhetho olucacileyo, kuba yayifumana i-airplay njenge-albhamu esikiweyo kwaye yayiyi-ballad eyayinokuwela iye kwezinye iifomathi. Ibhendi, nangona kunjalo, yathatha isigqibo sokuyikhulula, njengoko uEddie Vedder engafuni ukwenza ividiyo okanye kufuneka enze enye inkqubo yokwazisa. UVedder waphumelela elo dabi kunye 'nolwandle,' olwafumana ingqalelo encinci, wakhululwa njengowesine kunye nowokugqibela engatshatanga kwi-albhamu. Lo yayingumzuzu omkhulu kuPearl Jam kunye nomphathi wabo uKelly Curtis, owema kuSony kunye ne-CEO yabo enamandla uTommy Mottola, owabanyanzela ukuba bakhuphe 'uMnyama' njengoyedwa.
Isiginci sikaPearl Jam uStone Gossard ubhale umculo wale ngoma, ayibiza ngokuba ngu 'E Ballad' ngaphambi kokuba uVedder abeke amagama kuyo.
Le ngoma iye yaxelwa ukuba malunga nentombazana ekhupha isisu ngaphandle kokuxelela isoka lakhe, kodwa amazwi athi uVedder uthetha ngentombi (okanye umhlobo osondeleyo), owafa okanye wahlukana naye. Olunye uhlalutyo lweengoma:
'Amaphepha eeyile angenanto, amashiti angafundwanga' - Zonke izingqinisiso zobugcisa, izinto zobugcisa ezingatshintshiyo okanye ezisetyenzisiweyo.
'Ibekwe yandlala phambi kwam njengokuba umzimba wakhe wawusenza' - Isalathiso sesondo? Ngaba wasweleka?
'Zonke iihoroni ezintlanu zijikeleze umphefumlo wakhe' -Ingxelo enokwenzeka yenkolo, isihlanu linani elibalulekileyo kwiinkolo ezininzi (njengepentagram). Inokubhekisa kuye ekuchwetheni ngaphandle (imilenze emibini + iingalo ezimbini + 1 intloko = 5).
'Owu, ndiyazi ukuba wandinika yonke into awayeyinxiba' - Yonke into awayeyinxiba ingangumzekeliso wolwazi, impahla yomphefumlo.
'Oo, yonke imifanekiso ihlanjiwe emnyama, ibhalwe yonke into ...' - Wayenemifanekiso yowasetyhini, kodwa kwenzeka into kuye kwaye ngoku 'bamnyama' kuye.
'Ndirhangqwe ngabanye abantwana xa kudlalwa' - Inokuba kulapho kuvela khona ireferensi yokuqhomfa.
'Ndiyakuva ukuhleka kwabo, kutheni ndigqogqa' - Ingcinga yabantwana izisa iinkumbulo ezimbi. Mhlawumbi ngumntwana osweleke, kodwa ngakumbi ngumntu othile.
'Lonke uthando olubi luguqule umhlaba wam wamnyama' - Lo mgca uxhasa ithiyori yokwahlukana.
'NdinoTattoo konke endikubonayo, yonke into endiyiyo, konke endiya kuba kuko ... ewe ...' - Umbono wakhe kunye nobomi kunye nentsingiselo ifihliwe sesi siganeko sibuhlungu.
'Ndiyazi ngolunye usuku uyakuba nobomi obuhle, ndiyazi ukuba uyakuba yinkwenkwezi esibhakabhakeni somnye umntu, kodwa kutheni, kutheni kungenakuba njalo, kutheni ingangabi yeyam' - Ngoku unomntu Ngaphandle koko, kodwa ufuna ukuba kunye naye.
UAaron Lewis wenza le ngoma ehlala kunye negitare yakhe ye-acoustic ngexesha lohambo lukaStaind luka-2002. Ukurekhodwa kwayo kudlalwe kunomathotholo.
oh mickey amazwi akho amnandi
ngaphakathi umbi kakubi njengam
Ndakhe ndaya kuyo yonke ikhephu
yiza uzame kancinci akhonto ingunaphakade